‘सरकारलाई गाली गर्नेले मास्क त लगाउन सक्छ नि’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘सरकारलाई गाली गर्नेले मास्क त लगाउन सक्छ नि’
साउन १८, २०७७ आइतबार ८:२१:२५ | भाेजेन्द्र बस्नेत
काठमाण्डाै - पछिल्ला दिनमा काठमाण्डौमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ । परीक्षण बढाउने हो भने काठमाण्डौको समुदायमा धेरै कोरोना छ भन्ने चर्चा छ । के काठमाण्डौमा साँच्चिकै जोखिम बढेको हो ? यसबारे भोजेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
काठमाण्डौमा कोरोनाको जोखिम धेरै बढेको हो ?
काठमाण्डौमा कोरोना सङ्क्रमितहरु थपिने क्रम बढेको सत्य हो । तर मानिसलाई काठमाण्डौ बाहिर हुँदासम्म चिन्ता कम भयो, अनि काठमाण्डौमा आएपछि अब घरछेउमै आयो भनेर चिन्ता बढेको हो ।
समग्र देशको स्थिति हेर्दा सङ्क्रमणको दर घटेको छ । अघिल्लो महिना सङ्क्रमण दर आठदेखि १० प्रतिशत थियो भने अहिले तीन दशमलव छ प्रतिशतमा छ । तर काठमाण्डौमा देखिएको भएर मानिस डराएका हुन् ।
काठमाण्डौमा सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण देखियो, यसको अर्थ समुदायमा सङ्क्रमण छ भन्ने हो ?
सुरक्षाकर्मीले ल्याएर सुरक्षाकर्मीलाई सारेका हुन् । यसको कन्ट्रयाक भेटिएको छ । सुरक्षाकर्मीले सुरक्षामा मापदण्ड पालना नगरेकाले यस्तो भएको हो । धेरैले गरेको भए पनि जसलाई सरेको छ, उनीहरुले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाएका हुन् ।
त्यसो भए काठमाण्डौमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हैन ?
नियन्त्रण हामी गर्न सक्छौँ, तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकारले काठमाण्डौका ५० लाख मानिसलाई मास्क लगाइ दिन सक्दैन । हामीले साङ्केतिक रुपमा मास्क पनि लगाइदियौँ पनि ।
बाटोमा मास्क नलगाई हिँड्ने १६ हजारलाई मास्क लगाइदिएको छ । लाज हुनु पर्दैन ? सरकारले पाँच/छ हजार पर्ने परीक्षण गरेन भनेर कराउनेले दुई सय रुपैयाँको मास्क लगाउन सक्दैन ? कपडाको दुई वटा मास्क सिलाएमा पनि एक वर्षलाई पुग्छ ।
अहिले पनि धेरैको गुनासो समुदायमा फैलिएको हुन सक्छ, सरकारले परीक्षण गरेन वा ढाँट्यो भन्ने छ नि ?
ढाँट्यो भन्नेलाई त मेरो भन्नु केही छैन । त्यस्तालाई त मैले जवाफ दिन पर्दैन । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हो । धेरै इमान्दार छ । बरु मर्न तयार छ, ढाँट्न तयार छैन । नेपाल सरकारले ढाँट्यो भने पनि जागेश्वर गौतमले ढाँट्दैन ।
अनि सरकार त्यत्ति असंवेदनशील होला ? यो चाहिँ आफूलाई मन परेको कुरा सन्तुष्टि लिने तरिका हो । यो कोरोनामा राजनीति नगर भन्छु सबैलाई, भोलि यसले लैजाला ज्यान फेरि ।
बाक्लो बस्ती भएको काठमाण्डौमा जनजीवन सामान्य जस्तै भयो, सङ्क्रमित भेटिएका छन्, जोखिम घटाउन अब के गर्नुपर्ला ?
सङ्क्रमणबाट बच्ने जम्मा चारवटा उपाय छन् । पहिलो कुरा घरबाट बाहिर ननिस्कने, अति आवश्यक नभइ लखरलखर किन हिँड्नुपर्यो ? पसल नै चलाउनु छ भने पनि एक जना जाँदा हुन्छ । दोश्रो कुरा दूरी कायम गर्ने। यदि दूरी कायम गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तो ठाउँमा नजानुस् । तेश्रो कुरा मास्क लगाउनुस् ।
सर्जिकल मास्क लगाउनुस्, त्यो संभव नभएमा तीन पत्र भएका तीन वटा मास्क सिलाउनुस् । धुँदै पालैपालो लगाउनुस् । अनि चौथो कुरा हात धुनुस्, हात धुने अवस्था नभए स्यानिटाइजर लगाउनुस् ।
यति गरेमा कोरोना लाग्दै लाग्दैन । किन डराएको ? किन त्रास ? मान्छेहरुले जुलुस गरेको देख्छु । मान्छे किन यति मूर्ख भएको ? यो जुलुस गर्ने, नारा लगाउने बेला हैन । आफू हुलमुलमा जाने, अनि मेरो मान्छे मर्यो भनेर रुने सरकारलाई गाली गर्ने कुरा त भएन नि ।
अब काठमाण्डौमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नजिक आएको छ कि छैन ?
जोखिम बढेको सबैलाई थाहा छ । जोखिम बढेमा ठाउँ विशेष लकडाउन गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । अहिलेलाई रातको समयमा काठमाण्डौका नाकाबाट आवातजावात रोकिएको छ।
यदि सङ्क्रमण बढेमा लकडाउनसम्म पुग्न सकिन्छ । तर हरेक व्यक्ति सचेत भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेमा अहिले त्यो अवस्था आउन बाट रोक्न सकिन्छ भन्ने हो ।
Aug. 2, 2020, 11:11 a.m.
प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले गर्नुभएको कुराकानी राम्रो छ। अब संक्रमन अनुसार स्थनिय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन गर्ने, कोरोना कसरी न्यूनिकरण गर्ने, कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने, कति जरिवाना गर्ने अनि कति राहत क्वरेन्टिन सम्वन्धी व्यवस्था स्थानिय तहले गर्नु पर्यो सरकार। सबै कुरा सरकारलाईमात्र दोश दिने हैन। अबको पालो सभ्य र सचेत नागरीकको परिचय दिने बेला हो। धन्यबाद।
Aug. 2, 2020, 9:12 a.m.
यस्तै नालायक डाक्टरले गर्दा कोरोना डरको व्यापार भएको छ। कुनै पनि वेस्ट मास्कको प्वालको डायमिटर 300nm हुन्छ तर कोरोनाको डायमिटर 100nm हुन्छ भने मास्कले कसरी बचाउछ। स्यानिटाइजर एन्टी ब्याक्टेरियल हो, एन्टि भाइरल होइन। cdc को नया रिपोर्टले भन्छ बाहिर जाने भन्दा घरभित्र बस्नेलाइ बढि कोरोना देखियको छ भनेर।